Jereo izay ao ambadik'ireo marika malaza eto an-tany | Famoronana an-tserasera
Inona no ao ambadik'ireo marika famantarana
Antonio Moubay | | Inspiration, maro
Ny marika rehetra dia miezaka ny hanana sary masina. Fa, Inona avy ireo toetran'ny marika azonao araraotina hahatratrarana ilay tsangambato tadiavina? Amin'ity lahatsoratra ity dia mandinika ny sasany amin'ireo marika malaza indrindra eto an-tany izahay ary manadihady ny toetran'ny vokatra na serivisy natolotr'izy ireo hatrany, izay nanandratra azy ireo ho ekena ho marika malaza.
Ny zavatra voalohany dia ny marika, amin'ny fitsipika fototra, mila manana vokatra na serivisy lehibe, tena tsara ary eo an-tsena hatrany rehefa mandeha ny fotoana, ka izany no antony iray mahatonga izany fihetsika izany ho iray amin'ireo fanalahidy lehibe amin'ny làlan'ny marika iray hahatongavana ho kisary
Lafiny iray hafa amin'ny zavatra tokony hataon'ny marika iray mifantoha amin'ny vokatra na serivisy manan-danja, iray izay tena hampivoatra, tohanan'i a paikady goavana an'ny -barotra. Ny ezaka ara-barotra tsy miovaova arakaraka ny fandehan'ny fotoana no hanamafisana ny marikao ao an-tsain'ny olona.
Ny kisary dia mety manana zavatra toy ny endrika, loko, serivisy, toetra na toetra amam-panahy, ary tsy maintsy mifanaraka amin'izany mandritra ny fotoana maharitra. Ankehitriny, tsy midika izany fa tsy afaka mivoatra ny marika. Mivoatra ny karazana marika rehetraJereo i Coca-Cola, nivoatra efa zato taona lasa ny sary famantarana azy ireo, tena mitovy amin'ny taloha izy io, saingy niova izy ireo, nanao fanitsiana izy ireo mba hitazomana hatrany.
15 Endriky ny matoanteny amin'ny
Coca-cola dia nampiasa ny endriny mahazatra amin'ny tavoahanginy nandritra ny 100 taona mahery mametraka ny tenanao ao an-tsain'ny olona. Nanjary marika famantarana ity noho io. Ny silhouette an'ity tavoahangy ity dia fantatra erak'izao tontolo izao ary mety ny kaontenera malaza indrindra eto an-tany.
Ny marika dia afaka mampiasa ny firafitra ho toy ny singa kisarisary, ohatra, ny marika Marlboro dia nampiasa nandritra ny am-polony taona maro teo amin'ny boatin-sigarany, ny endrika mena eo ambony, ny sary famantarana azy eo ambany ary ny marika eo afovoany. Nanjary sary masina izy io misaotra fa nitazona an'ity firafitra ity hatrany izy ireo.
Hetsika hafa azon'izy ireo sintonina dia ny fiasan'ny vokatrao. Ny baoty Converse All Star dia kisary iray noho ny fampiasa azy (ary koa ny lokony, ny sary famantarana ary ny endriny), fa ny fiasan'ny tohotra anklena iray tamin'ireo lakileny io.
Ity koa dia mety ho lafiny mampiavaka ny marika. Apple dia nampiasa teknolojia tamin'ny fanavaozana azy, ary io no lasa saininy. Misy aza ny kolotsaina fanjifana manokana ny vokatra marika Apple ao amin'ireo mpampiasa azy.
Nampiasaina koa ho singa amin'ny fananganana marika. Ny Mickey Mouse malaza an'i Disney dia efa zato taona mahery ary ny fametrahana azy dia toy izany amin'ny aloky ny sofiny ihany no ahafahantsika mamantatra azy.
Ny ohatra mazava iray amin'izany dia mety ho avy amin'ny teny filamatra «Ny zava-mitranga any Vegas dia mijanona ao Vegas"Rehefa miteny ianao fa ny Las Vegas dia fety, zava-pisotro, fiainana amin'ny alina ary fampisehoana no tianao holazaina.
Raha manolotra boaty turquoise amin'ny tsipika fotsy isika dia tonga ao an-tsaina avy hatrany ny marika Tiffany. Ary ny anton'izany dia satria efa ela no nampiasain'izy ireo ny loko Pantone 1837. Voasoratra ara-dalàna aza Tiffany manga.
McDonald's dia nampiasa ny azy Andohalambo volamena amin'ny fonosana sy dokam-barotra rehetra nandritra ny am-polony taona maro. Ary tena mampiavaka azy ireo izy ireo ka rehefa hitantsika irery izy ireo dia efa fantatsika hoe iza izy ireo.
Ny siny Kentucky Fried Chicken, ny endriny manokana dia tompon'ny marika tanteraka.
Volkswagen Beetle malaza, izay navoaka nandritra ny Ady Lehibe Faharoa. Ny endrika aerodynamika an'ity fiara ity dia nahatalanjona manavao ny fotoana, ary tsy nanova izany izy ireo hatrizay, ary mbola manamboatra azy ireo any Mexico.
Ny toetra mampiavaka ny marika Facebook dia miankina amin'ny foto-kevitry ny fiarahamonina.
Ny marika iray dia afaka mampivelatra ny sary famantarana azy koa amin'ny fomba fiaina iray, ary i Harley Davidson dia nahalala ny fomba hanaovana izany amin'ny fomba tsy mampino amin'ny alàlan'ny môtô. Misy olona miaina ny fomba fiaina Harley Davidson tanteraka, manomboka amin'ny tombokavatsa ka hatramin'ny fitafiana hiatrehana moto. Ny zava-drehetra mifandraika amin'ny fiainan'ny olona dia hita taratra amin'ny marika.
Old Spice dia nanao asa lehibe tamin'ny fampiasana ny toetran'ny Terry Crews na i Isaia Mustafa amin'ny dokam-barotrao.
Ny feon'ny mozika an'ny Intel Inside ... pumpum pumpum!
Rehefa lasa verbe ilay marika. Ohatra "Google ity".
Loharano - Philip VanDusen
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Inona no ao ambadik'ireo marika famantarana
Wabi-Sabi ary famolavolana sary
Hifantoka amin'ny mashup frantsay ianao